Maxaa kasoo baxay kulanka khaaska ahaa ee Villa Somalia ku dhexmaray MD Farmaajo & Gud. Jawaari - Caasimada Online
Home Warar Maxaa kasoo baxay kulanka khaaska ahaa ee Villa Somalia ku dhexmaray MD...
Maxaa kasoo baxay kulanka khaaska ahaa ee Villa Somalia ku dhexmaray MD Farmaajo & Gud. Jawaari
Muqdisho (Caasimada Online)-Wararka aan ka heleyno Xarunta Villa Somalia ayaa sheegaya in Madaxweynaha Somalia Maxamed Cabdullahi Farmaajo uu habbeenimadii xalay kulan khaas ah la qaatay Gudoomiyaha Golaha shacabka BFS Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari.
Madaxweyne Farmaajo iyo Guddoomiye Jawaari ayaa waxa uu kulankooda qaatay ku dhawaad laba saac iyo bar, kaa oo ku saleysnaa khilaafka kala dhexeeya baarlamaanka Somalia.
Madaxweyne Farmaajo, ayaa marka hore Guddoomiye Jawaari ugu baaqay xasilinta xasaradda siyaasadeed ee maalmahaan taagan, waxa uuna sheegay in xasarada ceynkaasi ah ay qalqal u abuureyso dalka.
Madaxweyne Farmaajo waxa uu Guddoomiye Jawaari ka dalbaday in la qaboojiyo xiisada Siyaasadeed, iyadoo dib loo eegaayo mas’uuliyada baarlamaanka ka saaran xal u helida khilaafyada noocaan ah.
Madaxweynuhu waxa uu Jawaari u cadeeyay in shaqsi ahaantiisa uusan raali ka noqon doonin in xiisado siyaasadeed laga dhex abuuro baarlamaanka dalka,hadana uu diyaar u noqonaayo in wax waliba lagu kala saaro sharciga.
Farmaajo waxa uu tilmaamay in aasaaska xeerka uu yahay cadaalad iyo sinaan sidaa aawgeed aysan u kala eexan doonin labada dhinac, hase ahaatee ay wax waliba ku meelmarin doonaan waxa uu ka qabo sharciga.
Guddoomiye Jawaari ayaa aad usoo dhaweeyay dalabka Madaxweyne Farmaajo, waxa uuna cadeeyay in qudhiisa uu aad ugu qanci doono wixii sharci ah, iyadoo aan si gaara loogu asxaan faleynin.
Jawaari ayaa Farmaajo u xaqiijiyay in iminka uu diyaar u yahay in Mooshinka la horgeeyo baarlamaanka isla markaana uu qaato wixii kasoo baxa oo sharci ah.
Sidoo kale, Maxamuud Cabdiraxmaan Beene Beene oo kamid ah mudanayaasha taageersan Guddoomiye Jawaari oo u waramaayay Idaacada VOA ayaa sheegay in Madaxweyne Farmaajo iyo Guddoomiye Jawaari ay isku fahmeen in la dajiyo xasarada taagan.
Beene Beene, waxa uu sheegay in kulanka labada mas’uul uu xal u noqonaayo xiisada ka dhalatay Mooshinka, isagoo sheegay inuu ku rajo weyn yahay inuu imaado xal wanaagsan.
Beene Beene, waxa uu intaa ku daray in labada mas’uul ay xalay isku raaceen in Mooshinka si daah furnaan ah loo horgeyo kulanka xildhibaanada islamarkaana ay uga soo qeybgali lahaayeen xubno kamid ah Aqalka sare ee Baarlamaanka iyo goob joogayaal kale oo lasocda sida ay u dhaceyso codeynta mooshinka.
Si kastaba ha ahaatee, Mooshinka Guddoomiye Jawaari ka yaalla baarlamaanka ayaa la sheegay in cadadka mooshin wadayaasha uu sii kordhay, waxa ayna taa daaqada ka saari kartaa rajada Jawaari uu kusii joogi lahaa.